नि: शुल्क सम्पादक Lightroom Online
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > डाउनलोड गर्नुहोस् Lightroom Online
नि: शुल्क Lightroom
यो अनलाइन उपकरण शुरुआतको रूपमा र पेशेवर फोटोग्राफरहरू / retouchers को लागी एकको रूपमा बनाईएको हो नि: शुल्क लाइटरूम विकल्प। यस सम्पादकलाई मास्क, घुमाउरो र फिल्टरहरूका साथ गहिरो वा स्पट र color्ग सुधारको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। कस्टम ब्रश प्रयोग गरेर छालाको त्रुटिहरू हटाउनुहोस् र एक क्लिकमा चिल्लो ग्रेडियन्ट थप गर्नुहोस्। एडोब Lightroom online खरीद गर्नु अघि यो साधारण उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
यो लाईटरूम अनलाइन को पूर्ण प्रतिस्थापन हो?
होइन, यो नि: शुल्क फोटो सम्पादक रचनात्मक सुरु गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, जसलाई आधारभूत र color्ग सुधार र अर्ध-स्वचालित अनुहार छाला retouching प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
के म पेशेवर र color्ग सुधार गर्न सक्छु?
तपाईं मास्कको प्रयोग गरेर स्पट कलर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, फिल्टरहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा घुमाव प्रयोग गरी रंगहरू समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, साथै साना एक्ने, रातो र अन्य छाला त्रुटिहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं प्रकाशन वा प्रिन्टिंगको लागि फोटो तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी सुझाव दिन्छौं आउटसोर्स रंग सुधार विज्ञहरु लाई।
त्यहाँ निर्मित क्यामेरा कच्चा छ?
होईन, यो लाइटरूम अनलाईन प्रतिस्थापन मा क्यामेरा RAW मोड्युल छैन जुन उपलब्ध छ एडोब फोटोशप.
के म तेस्रो-पार्टी प्लग-इनहरू स्थापना गर्न सक्छु?
हो, यो Lightroom online प्रतिस्थापनले थर्ड-पार्टी प्लग-इनहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ फोटोशप ब्रशेस र पनि फोटोशप कार्यहरू। तर यो उल्लेखनीय छ कि तपाईं आयात गर्न सक्नुहुन्न लाइटरूम प्रिसेट्स डेस्कटप लाइटरूमबाट, सम्पादकले XMP र lrtemplate ढाँचामा समर्थन गर्दैन।
Adobe Lightroom Online - भिडियो ट्रिक्स: